आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल फागुन २ गते सोमबार,तदानुसार इश्वी सन् २०१७ फेब्रुवरी १३ तारिख – कृष्ण पक्ष तृतीया तिथी | karnalikhabar.com
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल फागुन २ गते सोमबार,तदानुसार इश्वी सन् २०१७ फेब्रुवरी १३ तारिख – कृष्ण पक्ष तृतीया तिथी – karnalikhabar.com
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल फागुन २ गते सोमबार,तदानुसार इश्वी सन् २०१७ फेब्रुवरी १३ तारिख – कृष्ण पक्ष तृतीया तिथी
प्रकाशित मिति :2017-02-13 01:07:20 आज श्री शाके १९३८, वि.सं. २०७३ साल फागुन २ गते सोमबार तदानुसार इश्वी सन् २०१७ फेब्रुवरी १३ तारिख, कृष्ण पक्ष तृतीया तिथी २९:३६ बजेसम्म चन्द्रमा सिंह राशिमा १६:०२ बजेसम्म पश्चात कन्या राशिमा सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु (ज्यो. प. सरोज घिमिरे / लाइटनेपाल डटकमबाट)
बैदिक ब्याक्तित्वहरुसँगको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । बिद्या क्षेत्र भने अधुरो रहने सम्भावना रहेको छ । पारिवारिक झोरझमेलाले सताउने छ । अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । आम्दानि क्षेत्र भने मध्यम रहने छ । शत्रु सबल रहलान ।
पारिवारिक साथ सहयोगबाट कार्य सम्पादनमा मद्दत मिल्ने छ । परिश्रम अनुरुपका फल प्राप्ति नहुनाले मन खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । आफूभन्दा सानाको सहयोगमा गरिएका कार्यहरु सफल रहने छन । आय आर्डनका स्रोतहरु फेला पर्ने समय रहेको छ ।
यात्रा झन्झटमय रहन सक्ने छ । मित्रजनको साथ सहयोगमा सामान्य कमी आउने छ । कार्य सम्पादनमा भएको सामान्य त्रुटिको सामना गर्नुपर्ने छ । बोलीको कारण आफन्तजनहरु रुष्ट रहनेछन । अरुको बिश्वासमा गरिएका कार्यहरुमा साधारण झन्झट उत्पन्न हुनेछ ।
खानपानको क्षेत्रमा रुचि जाग्ने छ । बोलीको कारण आफन्तजनहरु रुष्ट रहने छन । दिघो फाईदामुलक कार्यमा लगानी गर्ने समय रहेको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्ने छ । सामान्य धनमालको क्षति हुने छ ।
आय आम्दानिका नयाँ श्रोतहरु फेला पर्ने छन । साझेदारी कार्यक्षेत्रमा हात नहालेकै बेश रहने छ । शारिरीक आलस्यताले सताउनाले कार्य क्षेत्रमा साधारण झन्झट आईपर्ने छ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नुपर्ला । दाम्पत्य सम्बन्धमा खटपट आईपर्न सक्ने छ ।
तपाईको मेहनतको प्रतिफल गैर ब्याक्तिहरुलाई सहजै प्राप्त हुनाले कार्य क्षेत्रबाट मन टाढीने छ । मित्र तथा दाजुभाईहरुको निम्ति साधारण खर्च हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । ब्यापार ब्यबसायमा सामान्य हानीको सामाना गर्नुपर्ला ।
आय आर्जनका निम्ती समय राम्रो रहेको छ । गैर ब्याक्तिहरुको बिश्वासले कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ने छ । साझेदारी कार्यमा तथा नयाँ कार्यमा बिशेष फाईदा रहने समय रहेको छ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहला ।
सामान्य कार्यका निम्ति धेरै समय र श्रमको खर्च गर्नु पर्ने समय रहेको छ । पारिवारिक साथसहयोग द्वारा कार्य सम्पादनमा सहजता रहने छ । सभा सम्मेलनमा सारिक हुनाले आम्दानिका श्रोतको बाटो देखा पर्ने छ । यात्रामा साधारण झन्झट आईपर्ला ।
आर्थिक लेनदेनका क्षेत्रमा विशेष सजग रहनुपर्ने छ । सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुँदा सामान्य झन्झटका साथमा अगि बढ्नु पर्नेछ । सामान्य यात्रा पश्चात मानसम्मानको अवसर प्राप्त हुने छ । धार्मीक कार्यमा जुट्ने समयरहेको छ । कार्यमा आएको झन्झटलाई सम्पदान गर्न साहस बढ्ने छ ।
शारिरिक आलस्यता तथा अस्वस्थताको सामना गर्नुपर्ने समय रहेको छ । तपाईको गलत कदमका कारण आफन्तजनहरु टाढिएको अनुभब हुनेछ । मनमा कुबिचारको भाव पैदा हुन सक्ने छ । कुलकुटुम्भको साथ सहयोगमा बृद्दी हुने योग रहेको छ ।
मनोरन्जन तथा भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । प्रेम सम्बन्धमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुनाले मन चिन्तित रहने छ । ब्यापार ब्यबसायमा मध्यम दिन रहेको छ । बिश्वाशिलो ब्याक्तिबाट धोका हुन सक्ने छ । गौँण कुरालाई नखोलेकै बेश रहने छ ।
आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न निकै मेहेनत गर्नु पर्ला । प्रतिपक्षीहरु सबल रहनेछन । अनपेक्षीत खर्चको समय रहेको छ । सामान्य बादबिबादमा फस्न सकिने छ सजग रहनुहोला । प्रतिब्याक्तिहरुसँगको सम्बन्धमा खरावी आउला ।
एनसेलले घटायो ३० देशको कल शुल्क,अब प्रति मिनेट शुल्क रु १.९९ मात्र